Indlela yokuyila intengiso kwi-Instagram Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela yokuyila intengiso kwi-Instagram?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 229
Iinethiwekhi zentlalo ziye zaba yindlela yokusasaza esidlangalaleni ngaphezulu kwezinye iindlela zonxibelelwano namaphepha amaphephandaba okanye iintengiso ezikwiTV. Ngokwenxalenye ngenxa yesikhundla esikhulu sokuhambisa umxholo onikezelwa ngabasebenzisi abajoyina nayiphi na inethiwekhi.
Oko kukuthi, kusetyenziswa ii-smartphones, baninzi ngakumbi abantu abatyala ixesha labo kunxibelelwano lwasentlalweni. Kuqikelelwa ukuba umsebenzisi ophakathi uchitha imizuzu engama-58 yosuku lwabo ejonga amanye amabali abasebenzisi. Ke i-Instagram isebenzisa ithuba loku, ukubonelela ngazo zonke iintlobo zentengiso.
Kwangokunjalo, i-Instagram ilungiselele izixhobo ezinomdla ukwenza intengiso ebukekayo nenomtsalane. Kwiqonga uyakufumana iitemplate kunye neefayile esele zibekiwe ukuze wenze uyilo ngokulula.
Zeziphi izibonelelo ezinikezelwa kukuthengisa kwintanethi?
Ngokuthengisa kwinethiwekhi ungafezekisa iinjongo ezahlukeneyo, ngokwento ofuna ukuyiphumeza kunye negama lakho. Izitshisi ziphucula ukufikelela kunye nobuninzi bokubukela iprofayili yakho, ukwandisa amathuba okwandisa ukuthengisa kwakho okanye ukunikezelwa kwenkonzo.
Ke uphawu lwakho luya kufumana ukwamkelwa kunye nokusasazeka. Le yokugqibela inokuba yeyasekhaya kunye nenqanaba elibanzi lempembelelo.
Iindidi zeentengiso onokuzenza nge-Instagram
Enkosi ngenkqubo esebenza ngayo i-Instagram, unokufumana iindlela ezininzi zokupapasha. Eyona ilula kukupapasha kwifoto, yeyona ndlela ikhawulezayo kwaye banokudala kakhulu kwaye basebenze. Zingayilwa ngokuthe nkqo okanye ngokuthe nkqo.
Yenza iintengiso ngeevidiyo, njengoko zibonelela ngokubonakalayo kunokubonakala kunokubonakala kuneefoto. Unokwabelana ngevidiyo zentengiso ukuya kuthi ga kwimizuzwana engama-60 ubude.
Thengisa ngamabali e-Instagram. Ngale fomathi, ethi, nangona imfutshane kakhulu kwaye ikhawuleze ngakumbi kunezinye iindlela njengoko ihlala iiyure ezingama-24 kuphela, inokusebenza njengeyona ndlela ikhawulezayo kunye nesishwankathelweyo yokubonisa imveliso yakho.
Sebenzisa ukulandelelana kweentengiso, ukuze abasebenzisi babone ngaphezulu komfanekiso omnye, omnye emva komnye, kwaye ke bafunde okungakumbi malunga nemveliso okanye inkonzo yakho. Zihlala zenziwe ngumfanekiso ophambili kunye nemifanekiso yesibini enesiqulatho somxholo.
Ezinye iingcebiso ngentengiso yakho
Isiseko sentengiso kufuneka ibeyilo yenoveli, ehlengahlengisiweyo kwiinjongo zebrendi. Dlala ujikeleze ngemibala kwaye ungafaki uninzi lweetekisi ezinokudinisa abo banokuba ngabachaphazelekayo. I-Instagram ikuvumela ukuba usebenzise uyilo olwenziwe kwangaphambili onokuthi ulungelelanise nezinto ozithandayo.
Ukuyila intengiso akukho lula ukuyenzaKuya kufuneka ufune uncedo lweengcali zoyilo ukuba uziva ngathi awunakho ukuzenza ngokwakho.
Esinye sezixhobo onokuthi uthathe ithuba kuzo ziNtengiso ze-Instagram. Ngalo msebenzi, uya kuba nakho ukuyila intengiso yezixhobo ezahlukeneyo zeselfowuni, amanye amaqonga, iinkqubo zokusebenza kwaye kunjalo, iya kukuxelela kwinqanaba ngalinye ukuba uyile njani imifanekiso, ividiyo, ukulandelelana kwemifanekiso kunye nentengiso yokuqokelelwa kwenqaku.
1 Zeziphi izibonelelo ezinikezelwa kukuthengisa kwintanethi?
2 Iindidi zeentengiso onokuzenza nge-Instagram
3 Ezinye iingcebiso ngentengiso yakho
Ungayithulisa njani iTelegram?
Ndiswayipha njani isicelo se-Instagram?